Vaovao - [Famoahana vokatra vaovao] Detector gas composite tsy manam-paharoa tsy mitambatra izay mametaka detection-tsolika maro sy famaritana horonan-tsary, miaraka amina fampidinana 4G
[Famoahana vokatra vaovao] Detector gazy fitambaran-tariby tsy misy tariby mampifangaro detection gasikara maro sy detection vidéo, miaraka amina fampiasa 4G
Raha ny antontan'isa tsy feno dia maro ny lozam-pifamoivoizana afovoany no ateraky ny famoahana entona. Raha hita mialoha ny famoahana dia azo esorina ara-potoana ny loza mitatao miafina. Ho fanampin'izany, ny famoahana entona koa dia hiteraka fahasimban'ny tontolo iainana, izay mandany fotoana be sy miasa mafy itantanana.
Miorina amin'izany, ny detector gas dia nanjary iray amin'ireo fitaovana ampiasaina matetika amin'ny famokarana indostrialy, izay afaka mamantatra ny fifantohan'ny akora misy poizina sy mampidi-doza, ary afaka mamantatra ihany koa ireo karazana entona amin'ny tontolo iainana, ary mandray fepetra famonjena mifandraika amin'ny valin'ny detection.
Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny mpitsikilo entona dia mahita fivoahana amin'ny alàlan'ny fitiliana ny fifantohana entona amin'ny toerana famehezana ny fitaovana, saingy noho ny antony sasany na ny fiheverana ny fiarovana dia sarotra ny mamantatra ny tombo-kase sasany. Ohatra, raha toa ka tsy takatry ny inspektera ny toerana misy ny toerana misy ny famehezana, ary ny toerana misy ny famehezana dia any amin'ny faritra mampidi-doza, ny anton-javatra ferana isan-karazany dia nanemotra ny fandrosoana famonjena. Amin'izao fotoana izao dia ilaina ny detector gazy mitambatra tsy misy tariby!
Ny detérator gazy mitambatra tsy misy tariby iR119P (izay antsoina ankehitriny hoe detector) dia afaka mamantatra sy mampiseho tsy tapaka ny fifantohan'ny methane CH4, oxygen O2, carbon monoxide CO, hydrogen sulfide H2S ary sulfur dioxide SO2. Ny angona angon-drakitra sy ny tontolo iainana voaangona toy ny mari-pana, ny toerana misy ny fitaovana ary ny horonantsary mivantana sy ny horonan-tsary dia nakarina tao amin'ny sehatra tamin'ny alàlan'ny fandefasana 4G ho an'ny fitantanana tsy misy tariby.
Ny monitor dia mandray endrika endrika vaovao, tsara tarehy ary mateza. Miaraka amin'ny fiasan'ny fanairana mihoatra ny fetra, raha vao mihoatra ny fetra ny angona voaangona, dia hamelona avy hatrany ny hovitrovitra sy ny feo ary ny fanairana maivana ilay fitaovana ary hampiakatra ny angona ho amin'ny sehatra amin'izao fotoana izao. Ny vokatra dia afaka mampakatra ny fampahalalana momba ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso ireo mpitsikilo marobe, ary manangana sehatra rafitra fanaraha-maso sy fanaraha-maso marobe ho an'ny toeram-piasana manokana, ary manohana karatra fahatsiarovana 256G hitahiry horonantsary fandefasana eo an-toerana.
● Fanaraha-maso solika avo lenta: ny mpiasa eo an-toerana mitondra ny fitaovana dia afaka mitsara raha azo antoka ny tontolo manodidina azy ireo raha ny fampahalalana momba ny gazy asehon'ilay fitaovana, mba hiarovana ny ain'ny olona sy ny fananan'ny mpiasa.
● Feo mahery sy feo fanairana maivana: Rehefa tsikaritry ny fitaovana fa mihoatra ny fenitra ny lasantsy manodidina azy dia haneno sy hanaitra fanairana avy hatrany izy hampatsiahivana ireo mpiasa eo an-toerana hiala amin'ny fotoana mety.
● Fiolanan-tsolika momba ny gazy: manintona avy hatrany ny fiolahana fifantohana entona mifototra amin'ny fampahalalana momba ny detection, jereo ny fiovan'ny fifantohana entona amin'ny fotoana tena izy, ary manome angon-drakitra mahery vaika mialoha ny fisian'ny lozam-pifamoivoizana mialoha.
● Fampitana 4G sy fametrahana GPS: ampidiro ao amin'ny PC ny angona angona voaangona sy ny toeran'ny GPS, ary ny ambaratonga ambony dia manara-maso ny toe-javatra eo an-toerana amin'ny fotoana tena izy.
● Fampiharana marobe: Ny tester dia IP67 tsy misy vovoka sy tantera-drano, mety amin'ny fiasa amin'ny fotoan-tsarotra